भिरिङ्गी के हो ? यसको लक्षण तथा असरबारे जान्नुहोस् । - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
भिरिङ्गी के हो ? यसको लक्षण तथा असरबारे जान्नुहोस् ।
5 October, 2018 3:17 pm
१९ असोज २०७५, काठमाडौं
भिरिङ्गी प्यालिडम उपप्रजातिको ब्याक्टेरियम ट्रेपोनेमा प्यालिडमका कारणले हुने यौनरोग हो । भिरिङ्गीलाई चार चरणमा विभाजन गरिएको छ । प्राथमिक, माध्यमिक, निष्कृय र तेस्रो चरणको भिरिङ्गीगरि यसलाई चार चरणमा विभाजन गरिएको हो ।
भिरुङ्गी एक प्रकारको यौन रोग हो । आजकाल नेपालका सहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म सबैतिर यौन सम्पर्कका माध्यमबाट सर्ने रोग व्याप्त छ । मानिसको यौन आदतमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता रोग कुनै वर्ग वा समुदायमा सीमित नरहन सक्छ । यौन सम्पर्कका क्रममा अथवा असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारणले सर्ने रोगलाई हामी यौनरोग भनेर चिन्ने गर्छौं ।
यो चार किसिमको हन्छ । साहीअनुसारको नै यसको लक्षण पनि देखा पर्दछ । यसमा हामीले समग्र भिरिङ्गीको केही लक्षणहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
–शरीरभरि डाबर आउने,
–लिङ्ग, मलद्धार, भगोष्ठ ९योनिको बाहिरी भाग०, पाठेघरको मुख, घाँटी अनि ओठका वरिपरि नदुख्नेखाले घाउ खटिरा आउने,
–तौल कम हुने
सिफिलिस नेपालमा व्याप्त रहेको यौनरोग हो । यसलाई नेपालीमा भिरिङ्गी भनिन्छ । प्रायः घुमिरहने र छाडा यौन स्वभाव भएका व्यक्तिलाई यसको संक्रमण ज्यादा हुन्छ । केही दिनमा कतिपयको आफैँ निको भएर जान्छ भने कतिपयले एन्टिबायोटिक औषधि खाए पुग्छ । पुरुषका कारणले महिलामा पनि भिरिङ्गी सर्छ । उनीहरुको यौनांग वरपर घाउ देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा एक दिनको एन्टिबायोटिक वा इन्जेक्सन लगाएपछि रोग नियन्त्रणमा आउँछ ।
यसबाट बच्नलाई आफै सतर्क रहनु आवश्यक छ । समयमै यसको उपचार नभएमा यसले आँखा, दिमाग, नसा, मुटु, हाड तथा जोर्नीहरूमा असर पार्छ र शरीरका अन्य प्रणालीहरू नै खराब पार्न सक्छ। साथै भिरिङ्गी भएकी आमाले बच्चा जन्माएमा बच्चा अन्धो वा सुस्त मनस्थितिको जन्मने सम्भावना रहन्छ भने कहिले कही मृत्यु नै पनि हुन सक्छ ।
भिरिङ्गीको सुरुमा उपचार नभए जटिलता देखिने हुन्छ । उपचार नभएमा कतिपय गर्भवती महिलाको रोग शिशुहरुमा सर्न सक्छ । तर, तुलनात्मक रुपमा पुरुषहरुलाई भने समस्या हुँदैन । यो रोग लाग्नासाथ असुरक्षित यौनसम्पर्क राखे सर्ने जोखिम निकै उच्च हुन्छ । घाउ नै छ भने जोखिम ज्यादा हुन्छ।